Tuesday May 10, 2022 - 13:42:32
Shacabka soomaalida ayaa diidan faragelinta ciidanka Kenya ee Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa walaac xooggan ka muujisay amniga dalkeeda kadib digniino is daba joog ah oo kaga yimid dowladaha reer galbeedka, xilli wararka soo baxaya ay sheegayaan in heegan buuxa la galiyay ciidanka xukuumadda Nairobi.
Ciidamada millatariga kenya ee loo yaqaanno KDF islamarkaana ku sugan deegaannada ay xoogga ku heysato kenya iyo kuwa ammaanka ee dalkaas ayaa la galiyay heegankaan.
Saraakiil u hadashay ciidamada amaanka ee dowladda Kenya ayaa waay sheegeen inay ka feejigan yihiin weerar kaga yimaada dhanka XSHM, kadib weerarkii cuslaa ee ay Mujaahidiinta cagta ku mariyeen ciidankii Burudindi ee fadhiyay deegaanka Ceel-Baraf ee gobalka Sh-dhexe.
Tallaabadaan ay qaaday dowladda Kenya ayaa imaanaysa xilli digniino is daba joog ah ay soo saareen dowladaha reer galbeedka, kuwaas oo ka derinayay amniga dalkaas.
Xukuumadda Nairobi ayaa shaaca ka qaaday inay heshay xogo ku aaddan in Mujaahidiinta ay weerar ka fulin rabaa gudaha Kenya, sidaa aawgeedna ay heegan galisay ciidamadeeda.
Si guud dalka Kenya ayaa waxaa hadda ka taagan xaalad kacsanaan ah, iyadoona baqdin xooggan ay soo wajahday dadka Nasaarada Keenyaanka ah ee lagu beeray dhulalka Muslimiinta.
Dhanka kale waxaa isa soo taraya dowladaha cambaareynaya weerarkii cuslaa ee ay ciidamada XSHM kusoo afjareen xeradii ciidanka Burundi ay ku lahaayeen deegaanka Ceel-Baraf ee Sh-dhexe.
Dowladda Masar ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii Mujaahidiinta Al-Shabaab Talaadadii la soo dhaafay ay cagta ku mariyeen Saldhig Ciidamada Burundi ay ku lahaayeen degaanka Ceelbaraf oo hoostaga degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
War qoraal ah oo ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Masar ayaa waxaa tacsi tiiraanyo leh loogu diray dowladda iyo shacabka Burundi, iyo sidoo kale qoysaska dhibanayaasha ah ee waxyeelada kasoo gaartay weerarkaas.
Horey dowlado badan oo ay kamid yihiin Qadar iyo Turkiga ayaa tacsi midaan lamid ah udiray xukuumadda Bujumbuura, kuwaas oo dareensiiyay inay la xanuunsanayaan maadaama ay kuwada jiraan hal dhufeys.
Weerarkii Ceel-Baraf ayaa waxay Mujaahidiinta Al-Shabaab dhagta dhiiga ugu dareen in ka badan 173 askari Burundeys ah, iyagoona gacanta kusoo dhigay tiro maxaabiis ah, waxaana weerarkaan oo ahaa kii ugu horreeyay ee nuuciisa islamarkaana lala beegsada Burundeyska ka dhashay hadal heyn xooggan.